Translate Myanmar (Burmese) to Urdu | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Urdu, Myanmar (Burmese) to Urdu translations, Myanmar (Burmese) to Urdu Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား ہیلو آپ کیسے ہیں
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? کیا کوئی ہے
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, یہ ہیمبرگر کی قیمت کتنی ہے؟
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? کیا آپ مجھے ٹیکسی فون کر سکتے ہیں؟
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး میں معافی چاہتا ہوں
တဆိတ်လောက် معاف کیجئے گا
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို میں دلچسپی رکھتا ہوں
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ میری پرواز میں تاخیر ہوئی تھی
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို میں یہاں کاروبار کے لئے ہوں
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် ہیلو! میرا نام ہے
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို مجھے افسوس ہے، لیکن میں شادی شدہ ہوں
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? کیا آپ مجھے ہوائی اڈے لے سکتے ہیں؟
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ کیا وقت ہے، براہ مہربانی؟
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? قریبی پولیس سٹیشن کہاں ہے؟
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? کیا میں آپ کے فون چارجر برائے قرض لے سکتا ہوں؟
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? مجھے ایک پینے کا حکم دیں، براہ کرم؟
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? اس کی کیا قیمت ہے؟
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး میں گندگی کے لئے الرجی ہوں
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ ایک ڈاکٹر کو بلاؤ
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော کیا ڈاکٹر ہے
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? کیا مجھے کال کر سکتا ہے؟
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ براہ کرم مجھے اپنا باس بلایا.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် یہ جگہ بہت اچھا ہے
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ براہ مہربانی مجھے ہوٹل پر لے لو
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? میرا کمرہ نمبر کیا ہے؟